DHAGEYSO:-Askari Kenyan ah oo iska ooyay kaddib markii uu ka laabtay Somaliya!! | Voice Of Somalia
DHAGEYSO:-Askari Kenyan ah oo iska ooyay kaddib markii uu ka laabtay Somaliya!!
Posted on May 2, 2017 by Voice Of Somalia Image
Magaca Askarigan waxaa loo qariyay sabab la xiriirta Sumacaddiisa,waxaana loo bixiyay Makaca KEN oo aan ahayn kiisa rasmiga ah.
Markii uu weydiiyay halka uu ku dambeeyay jacaylkii isaga kala dhaxeeyay waxaa ay ugu jawaabtay “Adigaba waad I qiyaantay oo waxaad kufsan jirtay Dumarka Soomaalida,sidoo kalena Haweenka Ciidanka ku jira
ayaad la seexan jirtay,waxaana ii sheegay Taliyahaga”.
Taliyaha Ciidanka AFRICOM Oo Farmaajo Kula Kulmay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho.